Kalabaydhka Puntland maxa sababay? Madaxtooyada mise Golaha. – Geelle Mag
Home » Faallooyin
Staff Reporter Posted On October 27, 2019
Cabdxakin Dhoobo Daareed waxa uu ahaa mid kamid xildhibaanada Golaha Wakiilada ugu wakhtiga dheer. Ka hor inta uusan noqon Gudoomiyaha Golaha waxa uu soo tartamay saddex jeer oo laga guulaystay.
Shalay oo Sabti ahayd waxaa furmay kalfadhiga 45-aad ee Golaha Wakiilada Maamul Puntland. Waxaa kasoo qeybgalay Madaxweynaha, Saciid Cabdullaahi Deni. Kasoo qayb galka madaxweynaha ayaa ah mid dastuuri ah.
Kalfadhiga ayaa xambarsanaa dareen siyasadeed ee u dhexeeya gudoomiyaha iyo madaxweynaha. Dad badan ayaa hadal hayey inuu noqon doono kalfadhigan kii u dameeyey ee uu gudoomiye Dhoobo Daareed oo ah nin siyaasad ahaan lagu tuhmayo in uu u janjeero dhanka dawladda Xamar oo ah mid uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo Puntland ayaa la sheegay in ay madaxweyne Deni ku kala aragti duwanyihiin sida loo wajahayo xidhiidhka dawladda dhexe iyo tan Puntlad.
Kadib khudbadii madxweynaha Puntland waxa bilowday suaalo la waydiinayey madaxweynaha Puntland oo laga waraystay arrimo la xidhiidha dhanka ammaanka iyo horumarka wadanka. Lakiin, suaal uu waydiiyey xildhibaan ka tirsan golaha ayaa abuurtay buuq.
Xildhibaan Cawil Daad oo horay uga tirsanaa maamulkii hore ayaa madaxweynaha waydiiyey suaal ku dhaliilaysa amni darro, nidaam xume iyo habacsnaan siyaasadeed. Halkan hoose ka daawo jawaab celinta madaxweynaha oo caro ka muuqato:
Intaas ka dib madxaweynaha ayaa waxa uu si caro leh uga baxay xarunta Golaha Wakiilaha Maamulka Puntland.
Xildhibaanada isaga dhaliishan ayaa iyagu xarunta banaankeeda ku qabtay sharjaraaid kuna sheegay in madaxweynuhu baal maray dastuurkana ayna ugu fududahay kabasho biya ah inay rideen madxaeynaha Puntland haduu diido isla xisaabtan.
Tafatir la’aanta fariimaha madaxtooyada.
Dad badan ayaa aaminsan suaasha xildhibaanka inay ahayd mid xaqiiqda ka fog. Taas oo jaahwareer siyaasadeed abuuri karta. Lakiin jawaabta madaxweynaha ayaa u muuqatay mid iyadana turxaan ka muuqatay oo walibana ku abuurtay cabsi shacabka Puntland. Waxa dadka falanqayn arrimaha siyaasada iyo isla xisaabtan tilmaameen in madaxweynuhu si hufan uga bixi karay jawaabta maadama dad badan ula muuqatay in ay suaashu fogeyd oo ka dheerayn xaqiiqda bilihii lasoo dhaafay ka jirtay Puntland.
[irp][irp posts=”15183″ name=”Madaxweyne Deni oo si carro leh uga baxay xarunta Baarlamaanka Puntland”]Lakiin waxa sii hurinaya xaaladda qaabka xafiiska warfaafinta madaxtooyadu usoo gudbinayso dhacdooyinka jira. Dad badan ayaa ka dhur sugayey falcelin ku saabsan dhacdadii golaha wakiilada iyo xaaladda wadanku wajahayo. Fiidkii xalay ayey Facebook madaxtooyadu soo dhigtay fariin u muuqatay sii kala fogaansho u dhexeeya golaha shacabka.
Fariinta oo ahayd jawaab celintii cadhada lahayd ee madaxweynaha ayaa waxa lagu soo duloray, Madaxwayne Deni: “Dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo, uma baahna in ashuun lagu addamo”
Caado aan la aqoon.
Puntland mahan nidaam ay ku cusubtay is maamulku, lakiin saamaynta siyaasadaha wadanka ka jira iyo xidhiidhka baraha bulshada ayaa soo ifsaaray kala fikir duwanaansho ka dhex jira bulshada. Isqabqabsiga golayaasha dawladda oo gaaray heer aan horay loo arag ayaa ku dhex fiday bulshada taas oo abuurtay in ay kooxo kala taageersan labada gole ay qabtaan shirar ay ku taageereyaan madaxweyaha iyo xildhibaanada is khilaafsan.
Gudoomoiyaha gobolka Nugaal ayaa ugu hanjabay xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha in aan loo dulqaadan doonin wixii amniga gobolka Nugaal wax u dhimaya.
Waxa odeyaal iyo gudoomiyuhu ku qabteen shir jaraaid gobolka. Halkan hoose ka daawo.
Sidoo kale waxa lagu qabtay kulama lagu taageerayo madaxweynaha Puntland qaybo kamid ah. Taas oo caqabad kale ku noqon karta muranka ka dhex taagan wax iminka u muuqdo tiro yar oo xildhibaano ah laakiin aan la ogeyn tiraha inta ay dhanyihiin. Madaxweynaha inuu qaato tallaabadan ah inuu ka caradooda fikirka xildhibaanada ee ah in uu xilka ka tago ayaa iyadana dareen galisay inta uu le’eg khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha Golaha Wakiilada Puntland.
Ma xildhibaanada ayaa doonaya wax aan ahayn Puntland nimo?
Khudabadda gudoonka golaha wakiilada halkan ka daawo.